News Collection: मिन्स भएको कति दिनमा बच्चा बस्छ ?
म अविवाहित महिला हुँ। मैले मिन्स भएको तीन दिनमै यौनसम्पर्क गरेकी थिएँ। मलाई धेरै डर लागिरहेको छ। योनि पनि चिलाइरहन्छ। के कारणले हो ? मिन्स भएको कति दिनमा बच्चा बस्छ ?